waa qaab habaysan, ikhtiyaari ikhtiyaari ah loogu xallinayo isku dhaca, kaas oo ay dhinac saddexaad oo madax-bannaan ay weheliyaan dhinacyada isku khilaafsan geedi socodkooda xallinta. Dhinacyada isku dhacu waxay isku dayaan inay gaaraan heshiis guud oo fuliya baahiyahooda iyo danahooda.
Adoo qeexaya oo dib u fiirinaya cilaaqaadka iyo xaalada guud, oo dhex dhexaadiyaasha tababaran ay wehel u yihiin dhinacyada, waxaad ku abuuri kartaa xalal waara oo xasilooni leh ee u muuqda xaalado rajo beel ah. Qaabdhismeedka dhexdhexaadiyaha iyo wuxuu la socdaa doodaha u dhexeeya dhinacyada is khilaafsan iyadoo ujeedku yahay in baahiyaha dhammaan kuwa ku lugta leh la tixgelin karo.
Waxaan ku bixinnaa dhexdhexaadinta qaybaha soo socda: